६ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दै, कुनको कति ? - नेपालबहस
६ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दै, कुनको कति ?
| ९:२५:२२ मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । शेयरबजारमा चार कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएका छन् । शेयरबजारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र राधी विद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेका छन् ।
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले जेठ २० गते, (बिहीबार) बाट हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले १ बराबर ०:२९३८ को अनुपातमा प्रतिसेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरमा ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको हो । आज जेठ २० गतेबाट बिक्रि खुल्ला गरिएको उक्त हकप्रदमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी
कम्पनीले हकप्रद निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि जेठ २८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, जेठ २७ गते गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयरधनीहरुले मात्र उक्त हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले १:१.५ अनुपात अर्थात १५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्नका लागि पुस २६ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । बैंकले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । बैंकले हकप्रद निष्कासनका लागि सिभिल क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सेबोनबाट अनुमति पाएपश्चा्त कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछ ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १० बराबर ३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै वैशाख १५ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले ८ करोड ९३ लाख २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको हो । कम्पनीको उक्त हकप्रद सेयरमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ।
टिकटकको अत्यधिक लोकप्रियतासँगै बाइटडान्सको नाफा दोब्बरले बढ्यो ३ दिन पहिले
शाङ्पा फाउण्डेशनद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ७ दिन पहिले
एनएमबी बैंकको बचतमा खातामा सर्वाधिक ब्याजदर, अनलाईनबाटै खाता खोल्न सकिने ४ दिन पहिले
डाइभर्सनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न सास्ती ६ दिन पहिले
आज दुई हजार ५६५ औँ बुद्ध जयन्ती मनाइँदै ४ हप्ता पहिले
पत्रकारको निःशुल्क उपचारका लागि सरकारसँग आग्रह १ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञा सकिएपछि जोर–विजोर लागु गर्ने सरकारको तयारी २ हप्ता पहिले
मनसुन सक्रिय भएसंगै सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह ६ दिन पहिले
एमालेका थप १२ जना नेतालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण ४ हप्ता पहिले
वाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउन नागमती बाँध निर्माण गरिने ३ हप्ता पहिले
अब महराको दशैँ प्रहरी हिरासतमै २ वर्ष पहिले
अख्तियारलाई कारण देखाउन आदेश जारी २ महिना पहिले
प्रधानसेनापति थापाबाट नेतृत्व सम्वाद कार्यक्रम शुभारम्भ ९ महिना पहिले
रोकिएको कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल शुरु हुँदै, रोस्टरको अवधि छ महिना थपिने ७ महिना पहिले